पल शाहसँग नाम जोडिएका गरिमा र समीक्षाको लफडा के ? - गोकर्णेश्वर खबर
पल शाहसँग नाम जोडिएका गरिमा र समीक्षाको लफडा के ?
गोकर्णेश्वर खबर६ पुष २०७८, मंगलवार ०८:४९ मा प्रकाशित (१ महिना अघि) १८ पाठक संख्या
काठमाडौं । अहिलेकी व्यस्त मोडल गरिमा शर्माका विषयमा म्युजिक भिडियोको क्षेत्रमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुने गर्छन् । विभिन्न कारणले उनलाई कहिलेकाहीं विवादमा पनि ल्याउने गरेको छ ।
कहिले नायक पल शाहसँगको सम्बन्धको चर्चा त कहिले दुर्गेश थापासँगको टिकटक लाइभका कारण पनि उनी विवादमा आइन् ।
म्युजिक भिडियो बजारमा फेरि अर्को एउटा चर्चा चलेको छ, मोडल गरिमा शर्मा र गायिका समीक्षा अधिकारीबीच सम्बन्ध राम्रो छैन भनेर ।
उनीहरुबीच बोलचाल नै नभएको, झगडा भएको जस्तो चर्चा भिडियो बजारमा खुबै सुनिएको छ । केही समययता चलिरहेको यो चर्चाको विषयमा गरिमा पनि जानकार छिन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले यो चर्चा सुनेकी छु । तर, किन यस्तो हल्ला चलेको छ मलाई थाहा छैन ।’
गरिमाले आफू र समीक्षाबीच सम्बन्ध नराम्रो भएको भन्ने खबरको खण्डन गरिन् । उनले भनिन्, ‘म तपाईंलाई समीक्षा नानुसँग भएको कुराकानीको अडियो पनि सुनाइदिन सक्छु । हामी त च्याटमा पनि खुबै कुरा गर्छौं । खै, कसले यस्तो हल्ला चलायो म पनि छक्क परेको छु ।’
म्युजिक भिडियो बजारमा मोडल गरिमा र गायिका समीक्षाको नाम नायक तथा मोडल पल शाहसँग जोडिएकाले पनि उनीहरुबीचको तिक्तताको खबर चलेको जानकारहरु बताउँछन् । तर, गरिमाले समीक्षा आफ्नो बहिनी जस्तो भएको भन्दै उनीसँग कहिले पनि सम्बन्ध नबिग्रिएको बताएकी छन् ।
भलिबल संघका उपाध्यक्ष कुमारराज सुवेदीबाट खेल सामाग्री हस्तान्तरण
रेश्मा बोम्जनको नयाँ सेलो “मूंगाको माला” सार्वजनिक
हट पोजमा वर्षाको चुम्बन कसलाई ?
मिस तामाङ २०२२ को अडिसन शुरु
‘मिस वर्ल्ड’ प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित
केकीलाई मंसिरमै घरजम नभएकोमा चिन्ता!
‘चपली हाइट ३’ पुस १५ मा रिलिज हुने
क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरकी छोरी साराको मोडलिङमा डेब्यु